FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA HOVAWART - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Hovawart
'Lucy dia 3 taona izao. Mpinamana mahafinaritra izy. Lucy dia miaro ihany, saingy ara-tsosialy sy mahafinaritra ihany koa. '
Ny Hovawart dia toa a Golden Retriever . Mahery ny loha miaraka amin'ny handrina malalaka sy boribory. Ny karandohany dia mitovy halava amin'ny vava, misy fijanonana voafaritra tsara. Mainty ny orona ary misy vavorona mandroso. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ny maso mainty sy antonony volontany dia boribory boribory. Ny sofina mitete telozoro dia avo roa sy malalaka. Mahitsy ny tongotra eo anoloana. Ny tongotra dia boribory, matevina ary matanjaka, misy rantsantongotra voakambana tsara sy mafy. Dewclaws azo esorina. Ilay palitao lava volo sy matevina somary mikotraka, mandry tsy misosa. Misy volo lava kokoa amin'ny tratra, kibo, lamosin'ny tongotra ary eo ambanin'ny rambony. Ny loko palitao dia tonga mainty sy volamena, mainty na mainty.
Ny Hovawart dia manana hodi-kazo maranitra lalina. Hilamina ao anaty trano ity karazana ity raha toa ka mahazo fanazaran-tena ampy isan'andro izy. Izy io dia tapa-kevitra, mankatoa sy be fitiavana, indrindra amin'ny tompony. Tsy mivadika amin'ny fianakaviana. Tsara amin'ny ankizy rehefa mifanerasera tsara , nampiasaina tsara ary mahita ny olombelona ho toy ny alpha. Tena be fandavan-tena izy ireo ary manana faritany matanjaka ary tsy hirenireny lavitra. Mijanona ho filalaovana sy toy ny alika kely amin'ny fahanterany, ny Hovawart dia natokana ho an'ny olon-tsy fantatra fa alika fianakaviana mahafinaritra. Tsara toetra sy milamina mihitsy. Miaro, mailo ary mpiambina tsara ity alika be herim-po ity. Hiaro ny fanananao amin'ny mpiditra an-tsokosoko am-pitiavana be. Rehefa manondro ny fandraisana azy ireo mpitsidika azy dia hanaiky azy ireo avy hatrany. Ny orona Hovawart dia manana orona manitra tsara. Manan-tsaina izy io ary azo zarina amin'ny ambaratonga avo, mianatra haingana izay antenainao momba azy. Ny vokatra tsara indrindra dia tratra miaraka tena mifanaraka , be fitiavana ary fiofanana mahay mandanjalanja . Ny lehilahy tsy manam-pahefana dia mety ho fanamby tokoa. Ny Hovawart dia karazany lehibe , izany dia mitaky a tompony mafy orina, efa za-draharaha. Raha tsy eo ny tompony mampita ny fitarihan'izy ireo ny Hovawart dia mety ho mahery setra amin'ny alika hafa nefa mahomby amin'ny biby fiompy tsy kaninina ao an-tokantrano raha mifanerasera tsara. Raha tsy mitsabo ny Hovawarts amin'ny tompony ny tompony ka tanteraky ny fitarihana sy famoahana angovo ara-batana sy ara-tsaina, Mety hiteraka tahotra izy ireo, na ho menatra. Hovawarts dia mety tsara amin'ny fanarahana, famonjena avalanche, ho toy ny mpiambina ary ho an'ny toe-javatra fiarovana.
Hahavony: 23 - 28 santimetatra (58 - 70 cm)
Milanja: 55 - 90 pounds (25 - 51 kg)
Ity dia karazany tena mahasalama. Na izany aza, ny tiroida tsy miasa dia miparitaka amin'ny tsipika eoropeanina. Hip dysplasia indraindray mitranga.
Hovawarts dia tsy asaina amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary hanao ny tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny. Tian'izy ireo ny toetrandro mangatsiaka ary afaka matory any ivelany. Izy ireo dia mpiambina miavaka, indrindra ho an'ny tranon'omby, any an-tsaha ary trano any ambanivohitra.
Ny Hovawart dia mila raisina isan'andro MANDEHANA , jogging sa mihazakazaka. Raha eny am-pandehanana dia alao antoka fa ny alika dia miakatra eo anilany na ao aoriany ilay mitazona ny firaka, tsy eo alohany mihitsy, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho ny olombelona. Ny fitsangantsanganana lava sy fitsangantsanganana matetika ary ny fahafaha-mihazakazaka sy milalao ny firaka dia ho faly tokoa ary hitazona azy ireo ho salama. Mihazakazaha mora amin'ny tany sarotra.
10-14 taona eo ho eo.
Ny palitao Hovawart dia mora taovolony. Ny fikosehana sy fikosehana tsindraindray, fikolokoloana bebe kokoa amin'ireo toerana mety hitrangan'ny korontana, no ilain'ity karazany ity. Mpivarotra salan'isa izany.
Avy any Alemana ny Hovawart. Izy io dia karazan'asa miasa tena taloha niavian'ny Terre-Neuve , Leonberger , ary angamba ny Kuvasz hongariana . Ny tanjon'ireo mpamolavola azy dia ny hamerina hamorona ilay alika mpiambina fananana lehibe amin'ny Moyen Age. Ny Hovawart dia tsy fahita firy any Etazonia, fa malaza any Alemana. Eike von Repgow dia nanoratra momba ny 'Hofewart' ho alika mpiambina ao amin'ny Sachsenspiegel. Izy ireo koa dia naseho tamin'ny sary tamin'ny alàlan'ny fanarahan-dia 1400. Saika lasa ilay karazany lany tamingana tamin'ny taona 1200, na izany aza tamin'ny taona 1920, mpiompy iray antsoina hoe Kurt Konig no niasa tamina programa namerenana ny laoniny. Nahomby ny ezaka nataony ary neken'ny German Kennel Club ny karazany tamin'ny 1937. Ny talenta sasany an'ny Hovawart dia ny watchdog, Schutzhund, ny fikarohana sy ny famonjena ary ny fanarahan-dia.
'Miaraka amin'i Lucy, Leo dia ao amin'ny fianakavianay izao. Amin'ny 9 volana dia tena mamy sy saro-pady izy. Izy dia efa mpiambina tsara nefa sariaka vantany vao hitany fa mandray olona isika. Leo tsara miaraka amin'i Lucy ary koa ny anay 5 taona saka Tsara tarehy.'
Leo the Hovawart amin'ny maha alika azy amin'ny 4 volana
'2.5 taona i Lucy ankehitriny ary nivoatra tsara. Izy dia mamy, milalao ary be fandavan-tena nefa koa mailo ary miaro. Hovawarts dia mila faharetana be ary fiofanana mitohy . Mamaly tsara izy ireo dera sy valisoa miaraka amin'ny a fomba hentitra nefa malefaka . Lucy dia 26 'lava sy 74lbs ..'
Lucy the Hovawart amin'ny faha-8 volana— 'Lucy dia be fitiavana, tapa-kevitra, manan-tsaina, mavitrika ary miaro. Toy ny ankamaroan'ny Hovawarts dia milalao ny lanezy izy, mandeha lavitra ary manakaiky ny fianakaviana. Malalaka amin'ny fampiofanana izy ary mampiasa tsara indrindra amin'ny fampiarahana fanamafisana tsara sy teknika alpha mafy orina (fa manam-paharetana) . '
Remy the Hovawart amin'ny faha-11 taonany— '15 taona i Remy ankehitriny. Very ny ankamaroan'ny fandrenesany, very ny masony (indrindra amin'ny maso havia), ary manana valahany ratsy. Na eo aza izany dia mbola manandrana mandeha sy miakatra amin'ny tohatra izy. Matetika izy no niondrika niampita olona mandalo nefa izao efa tsy mandre intsony izy dia mihombo 5 minitra aty aoriana rehefa maimbo azy ireo. Mihombo ihany koa izy rehefa misy miala ny trano izao. Miaraka amin'ny alika kely kokoa noho izy izy ary saro-kenatra amin'ireo lehibe kokoa. Mifanaraka amin'ny saka sy biby kely hafa izy. Miaraka amin'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra izy ary tena mahatoky. '
Gandhi de LaVillaRoy, sary natolotry ny Hovawart an'i LaVillaRoy
Fenja von der Koboldshütt, sary natolotry ny Hovawart an'i LaVillaRoy
Lancelo, sary natolotry ny Hovawart an'i LaVillaRoy
Phonix von der Rabenleithe ny alika kely Hovawart
Phonix von der Rabenleithe the Hovawart eo amin'ny 4 taona eo ho eo
Hijery ohatra hafa momba ny Hovawart
Sary Hovawart 1
chow chow mainty sy fotsy
alika latsaky ny 50 pounds
sarin'ny poo shih
pomeranian afangaro amin'ny shih tzu amidy